Qiso Cajiib Ah Maxaa Dhex Maray Macalimadii Iskuulka Ee Amarka Siisay Ardaydii Fasalka.. - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Qiso Cajiib Ah Maxaa Dhex Maray Macalimadii Iskuulka Ee Amarka Siisay Ardaydii Fasalka..
Published: February 24, 2017, 3:58 pm
Macalimad Xisaabta dhigta ayaa Ardayda weydiisay inay laba warqad ku qoraan magacyada ardayda fasalka. Ka dib waxay u sheegtay inay ka fakiraan waxa ugu wanaagsan ay ka oran karaan arday kasta, kana qoraan. Waqti bay ku qaadatay inay dhameeyaan shaqadi loo diray. Warqadihi bay dhiibeen, fasalkina waa ka tageen. Maalintaa macalimadi warqad cad ayay ku qortay macaga arday kasta & wixi fiicnaa ee laga qoray.
Maalinti xigtay, waxay siisay arday kasta warqadiisi. Aqris ka dib, fasalki oo dhan waa dhoolacadeynayeen. Arday kasta wuxuu dareemay inuu qiimo ku leeyahay ardayda kale dhexdooda. Ardaydu aad bay isugu farxeen, xiriirkoodina waa siyaaday.
Maalmo ka dib, Qofna ma soo hadal qaadin qoraalki. Macalimadu ma ogayn in waalidkood ama saaxiibadood kale u sheegeen & inay hilmaameen balse waxay ku faraxsaneyd in ujeedadi shaqadaa ay ka lahayd u fushay sidi la rabay.
Dhawr bil ka dib, ayaa Arday fasalkaa ka mid ah geeriyooday. Macalimadi & ardaydi ayaa Tacsi ugu tagay qoyskiisi. Aabihi & Hooyadi ardaygaa dhintay ayaa ku yiri, “Ma Macalimadi heblaayo ayaa tahay? Waxay tuseen warqad ay ka soo saareen boorsadiisi jeebkeeda. (Waa warqadi wanaaga & amaanta ay ardayda kale ka qoreen) Waxay u sheegaan in wiilkooda uu weligii dareemi jiray kelinimo, u heystay in dadku neceb yihiin oo aan la rabin. Balse warqadaa markuu helay ka dib ay noloshiisi is bedeshay, uuna daremay inuu qiimo iyo tixgelin ku dhex leeyahay ardayda kale. Aad baad ugu mahadsan tahay inaad sidaa sameyso, noloshiisina wax ka bedesho.”
Ardaydi kale ee la socday ayaa iyagana soo saaray qoraalki wanaaga ee laga qoray, waxayna sheegen inay dhamaantood keydsadeen qoraalkaa.
Macalimadi indhaheedi ilmo ayaa ku soo istaagtay, oohin ayay la fariisatay. Marnaba ma filayn in shaqadaa yar ay bedeshay nolosha arday badan.
In badan oo ku nool rajo la’aan iyo quus waxaa ugu wacan iyagoo waayay rabitaan & tixgelin, dareemay in la takooray. Schoolada waa qeyb ka mid ah halka Bulshadu ku barbaarto.
Noloshu way gaaban tahay. Fadlan kula dhaqan cid kasta dabeecad & akhlaaq fiican. Ugu yeer dadka magacyo wanaagsan. Salaan qof kasta oo kaa soo hor baxa ama aad kulantaan xitaa hadii aadan garaneyn.
Tus dadka inay agtaada qiimo ku leeyihiin, muhiimna yihiin. Adigu ma garan kartid, laakiin Hadal fiican, bogaadin iyo ficil yar aad qof u sameyso ayaa noloshiisa bedeli karta ama rajo gelin karta.
Ma Rabtaa Guul iyo Farxad? Ma Rabtaa Carruurtaada Iyo Maalkaaga Inuu ALLAH Kuu Dhowro, Hadaba Samee….